Ciyaaraha xagaaga - Waxa ugu fiican in lagu xisaabtamo | Bezzia
Ciyaaraha ugu fiican ee lagu tababarto xagaaga
Susana godoy | 14/06/2022 16:00 | Jimicsiga
Ciyaaraha lagu tababaro xagaaga waxay noqon karaan kuwa ugu kala duwan. Sababtoo ah imaatinka cimilo wanaagsan ayaa mahad leh, waxaan u bixi karnaa oo ku raaxaysan karnaa hawada cusub si aan u qaadno dhaqdhaqaaq yar. Waa run in ay tahay in aan iloobo maalmaha ugu kulul iyo saacadaha dhexe ee maalinta, ka fogaanshaha dhammaan hawlaha noocaan ah.
Laakin haddii ugu dhakhsaha badan ciidaha ay noqon doonaan jilayaasha noloshaada, waxaad had iyo jeer haysan kartaa wax yar oo ka mid ah wax walba. Dhinaca kale nasasho wanaagsan oo u qalma, laakiin dhinaca kale madadaalo qaabka tababarka. Sidan, jidhkaagu wuxuu ku sii wadi doonaa firfircoonida, iyo tan ugu muhiimsan, caafimaadka leh sida sanadka intiisa kale. Aan bilowno!
1 Dabbaasha mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican ee lagu tababarto xagaaga
3 Dusha sare
5 dabaasha dabaasha
Dabbaasha mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican ee lagu tababarto xagaaga
Waa run in dabaasha lagu dhaqmi karo sanadka oo dhan. Tagitaanka barkada jiilaalka sidoo kale waa ikhtiyaar aad u fiican. Laakiin si macquul ah marka xilliga xagaaga yimaado, waxay u muuqataa in dhiirigelintu naga qaadato. Waxaa la joogaa waqtigii aan nafteena ku qaadi lahayn mid ka mid ah ciyaaraha ugu dhameystiran. Runtii waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican iyo da 'kasta ama xaalad kasta. Xataa dadka dhabar xanuunka qaba ama haweenka uurka leh. Faa'iidooyinka dabaasha waxaan dhihi karnaa inay hagaajiso dabacsanaanta laakiin sidoo kale xoogga iyo dulqaadka. Isla mar ahaantaana waxaan ka tagnaa qadar wanaagsan oo kalooriyo ah.
Inkasta oo xilliga jiilaalka aan sidoo kale samayn karno dariiqa qallafsan, ma jiraan wax la mid ah ku raaxaysiga socodka marka cimiladu aad u fiican tahay. Si taas loo sameeyo, waa inaan dooranaa maalmo aan aad u kululayn. Tan iyo markaas kaliya waxaan ku raaxaysan doonaa safarka iyo muuqaalka muuqaal aad u badan. Socodku waa mid ka mid ah jimicsiyada lagu taliyay iyada oo aan loo eegin xilliga aan ku jirno. Marka laga soo tago inay faa'iido u leedahay jidhka, waxay sidoo kale faa'iido u leedahay maskaxda, maadaama ay na dejin doonto oo ay nafiso dhammaan diiqada.
Shaki la'aan, waa ciyaaraha xiddigaha xagaaga. Sababtoo ah waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa cimilada wanaagsan iyo xeebta si aad u tijaabiso. Hubaal meel u dhow meesha aad ku nooshahay ama meesha aad ku qaadato xagaaga waxaa jiri doona xiisado ciyaarahan ah. Dadka waaweyn iyo carruurtaba waxay yeelan doonaan fasallo la jaanqaadaya heerkooda, wax yarna waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato adrenaline-ka innaga taga.. Waad ogtahay in mahaddeeda aad sidoo kale hagaajin karto jirkaaga oo aad xoojin karto murqahaaga. Adigoon iloobin inay tahay hab ku habboon oo lagu nafiso walbahaarka.
Ma fududa, waa inaad qirataa. Laakin kitesurfing sidoo kale waa mid kale oo beddelka ah si ay u awoodaan in ay ku jiraan guddiga iyo dabcan, biyaha. Laakiin marka lagu daro in looxa sheegay in aad yeelan doontaa in aad isteerinka kite ah, sidaas darteed dheellitirka iyo falcelinta ayaa fure u ah ku celcelinta ciyaarahan oo kale. Sidoo kale wax dhib ah ma keenayso in aan isku qorno koorso si aan u barano aasaaska, iyo sidoo kale tabaha ugu fiican. Waxaan kuu xaqiijineynaa in dhaqankan oo kale uu ka dhigi doono adrenaline-kaaga kor u kaca, adigoo qabanaya shaqo aad u wanaagsan oo hawada sare ah.
Ka faa'iidaysiga badda iyo cimilada wanaagsan, waxaan sii wadeynaa ka hadalka looxyada biyaha. Xaaladdan oo kale, waxaan leenahay Paddle surfing, taas oo ah mid kale oo ka mid ah fursadaha ugu weyn ee qaabka ciyaaraha ugu fiican ee lagu dhaqmo xagaagan. Waa inaad ku ilaaliso dheelitirkaaga sabuuradda oo aad naftaada ku caawiso suuf si aad hore ugu socoto. Haa, waxay u muuqataa mid fudud laakiin mar walba sidaas maaha. Waad ku mahadsan tahay jimicsigan oo kale, Waxaad awoodi doontaa inaad ka shaqeyso kooxo muruqyo kala duwan ee jirka oo dhan. Inkasta oo kuwa ugu muhiimsan ay noqon doonaan mataanaha ama barida, laakiin iyada oo aan la iloobin in caloosha ama xuubka iyo biceps ay sidoo kale soo geli doonaan ciyaarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Jimicsiga » Ciyaaraha ugu fiican ee lagu tababarto xagaaga
Gaalnimo sida aargoosiga lamaanaha
Taxanaha ugu sarreeya ee Netflix: 'Hooyo qumman'